Mpisolovava online - ara-dalàna ny Toro-hevitra
Mpisolovava online — ara-dalàna ny Toro-hevitra
Afaka hifandray ny mpisolovava an-tserasera avy any an-trano na avy any am-piasana. Ary tsy afaka manao izany na dia ankehitriny aza.
Aina kokoa noho izany. Mandehana any amin’ny mpisolovava afaka midika koa hoe very ny antsasaky ny andro, raha ny studio feno. Ny torohevitra ao amin’ny internet na amin’ny telefaonina, anao hamonjy fotoana sarobidy mba hanokana ny zavatra hafa. Ny toro-hevitra dia ny toekarena indrindra ao amin’ny internet, raha tsy hilaza izay handoa amin’ny alalan’ny fandoavana ny fitsidihana ny mpisolovava ho fakan-kevitra (mihoatra ny). Na inona na inona ny fanontaniana, marina ara-dalàna hamaly anao ao anatin’ny fotoana fohy. Lova, filazana, lamandy, ny fitoriana atao, filazana, ny lalàna mifehy ny asa, ny orinasa, fotsiny ny anarana vitsivitsy, dia ny an-tsaha. Avy hatrany izy hoe ny mpisolovava mba hahazo ny fakan-kevitra avy hatrany. Mazava mpisolovava hamaly anao sy hitari-dalana anao mandraisa andraikitra-izay afaka manao ho an’ny toe-draharaha. Ny hiantso ny mpisolovava amin’ny aterineto manana ny vola lany fotsiny, ary ianao dia manana ny tsara, izay ilaina, anisan’izany ny valinteny an-tsoratra. Ny antso dia fakan-kevitra ho ara-dalàna rehetra ny vokany, ary dia manokana ny mpisolovava. hanampy anao Afaka miditra ny fangatahana an-tserasera mivantana amin’ny tranonkala ity. Fahafahana mampiditra ny antontan-taratasy mba ho toro-hevitra dia mbola ny tena marina ary ny marina. Azo antoka valin-misy karazana olana ao anatin’ny ora vitsivitsy. Azafady avy hatrany ny fifandraisana mpahay lalàna hoe iza no nametraka anao miadana eo ny resaka. Ny nomeraon-telefaonina (Rivotra finday) dia ho aseho avy hatrany rehefa avy ny fandoavam-bola miaraka amin’ny fehezan-dalàna ny antso. Izany fandoavam-bola dia manana zo ho fakan-kevitra, ny kokoa ny mandefa ny voasoratra ara-panjakana ny taratasy avy amin’ny antoko hafa (nanao sonia ny mpahay lalàna) fa ny manomboka ny fanapahan-kevitra ara-dalàna. Valiny ao anatin’ny fotoana fohy. Ara-dalàna ny asa natolotry ny vohikala dia tsy ahitana ny fandaniana fanampiny. Midika izany fa ianao dia tsy tena maintsy, raha toa ka mila manomboka ny lalàna, mba hanohy ny fifandraisana amin ny Mafy. Ianao maimaim-poana mba mangataka ho fakan-kevitra, mba ho tahirin-kevitra dia nosarihana niakatra avy ny mafy amin’ny vola tena ambany dia ambany sy tsy mihoatra ireo hita. Izany rehetra izany dia tafiditra ao ny vidiny. Ny toro-hevitra dia atolotra manokana avy amina Mpisolovava iray, Paolo Borea, izay tao am-po ny Mpanjifa, ary tiany ny manome ny aterineto fanompoana ny Tsara. Fahaizana, ny traikefa sy ny maha-matihanina no teny izay tsara indrindra hamaritana ny maha-matihanina. Mpisolovava Borea, mampiasa fiteny tsotra niaraka tamin’ny Mpanjifa sy miezaka foana mba hahatonga azy ireo hahatsapa miadana. Na amin’ny alalan’ny antso an-tariby fantsona fa ny alalan ny fifandraisana an-tserasera, Andriamatoa Borea dia miasa eo ambany ny fanerena ny tsiambaratelo. Izany dia zo ny olom-pirenena tsirairay. Noho izany, aza misalasala mizara ny olana amin’ny fahatoniana, ny angon-drakitra manokana dia voaaro araka ny lalàna momba ny fiainana manokana.
Ary fantatsika fa ny tena tsara
manome fitaovana ara-toro-hevitra azo atao amin’ny alalan’ny fitaovana elektronika fantsona, na an-telefaonina. Ny torohevitra araka ny lalàna ny mpisolovava. fanampiana natolotry ny lalàna Mafy ny Mr.
Mpisolovava Borea hamaly manokana ny antso sy ny modules ao. Ny toerana dia tsy ara-batana izay azo atao, raha jerena ny isan’ny fangatahana, ny hetsika dia mandeha amin’ny alalan’ny mpisolovava hafa voafantina. Toy izany ny toro-hevitra, amin’ny tranga tsirairay, dia ho foana amin’ny alalan’ny mpisolovava, matihanina mpikambana ao amin’ny trano fisotroana fikambanana, ary tsy tapaka ny mpandraharaha. Ny toro-hevitra natolotry ny mpisolovava. hanampy dia fehezin’ny nanoritra fehezan-dalàna momba ny fitondran-tena, mampifanaraka ny vaovao fitaovam-pifandraisana, sy ny tombontsoa hitsangana avy amin izany ny asa ara-dalàna. Ny fanompoana hiantso ny mpisolovava, dia ho mitondra ny lohateny hoe amin’ny parry ara-dalàna hendry ny ampahany amin’ny mpampanoa lalàna Borea na avy amin’ny mpahay lalàna hafa (jereo etsy ambony). Ny mpanjifa mitaky ny ara-dalàna ny heviny amin’ny alalan’ny antso an-tariby, ny Mpisolovava Borea izay izy dia tsy maintsy mihaino sy mampiroborobo ny antso amin’ny vaovao izay hahatakatra bebe kokoa avy amin’ny fifandraisana. Rehetra ny toro-hevitra avy amin’ny matihanina manokana ara-dalàna amin’ny rijan-hanana afa-tsy amin’ny tokotokony ho sarobidy sy afaka amin’ny tsy misy fomba mpisolo toerana ny teknika fiarovana voatokana amin’ny lalàna ny mpampanoa lalàna. Ny ara-dalàna hevitra navoakan’ny mpisolovava iray Boreas, na avy amin’ny mpisolovava hafa namaly ny asa fanompoana dia tsy amin’ny fomba rehetra mamatotra ny ara-pitsarana, ny fihenan’ny avy izao amin’ny rehetra andraikitra ao ny raharaha ny mety ny fampiasana. ny mpahay lalàna, ary izany disclaims andraikitra na ratsy ny voka-dratsy ateraky ny fahatarana, ny tsy fampisehoana na ny takelaka noho ny mpampiasa ireo mpampiasa ny fanompoana, na ny tsotra mpitsidika ny toerana
Ahoana no fanekena ny lova